Author Topic: दरवार हत्याकाण्ड - Paras Interview - Killer trigger: Foiled $23m gun deal (Read 37766 times)
« Reply #20 on: April 29, 2018, 06:39:10 AM »
« Reply #21 on: May 08, 2018, 03:10:44 AM »
paras involved ?
आफैंलाई गोली हान्न लगाए, भारत जान खोज्दा पक्राउ
२४ वैशाख, काठमाडौं । हिन्दु धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवासले धार्मिक र साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउने योजनाका साथ आफैंमाथि गोली हान्न लगाएको पाइएको छ ।
नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा रहेका आचार्य सोमबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् । सुनसरी बराह नगरपालिका ६ चक्रघट्टीस्थित लक्ष्मी बेङ्कटेस आश्रममा बस्दै आएका २४ वर्षीय आचार्यमाथि २५ चैत गते गोली प्रहार भएको थियो ।
तर, अनुसन्धानका क्रममा आफैंले योजना बनाएर गोली हान्न लगाएको देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
मोरङ प्रहरीले सोमबार नै आचार्यसहित गोली काण्डमा संलग्न अभियुक्तहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा चितवन भरपपुर बेलचोकका २९ वषर्ीेय माधव चौधरी र नवलपरासी गैंडाकोट ५ का ३२ वर्षीय खान र सन्तोष भन्ने लक्ष्मीराज अधिकारी छन् ।
हिन्दूराज्य कायम गर्न विभिन्न समयमा आन्दोलन चलाएपनि सफल हुन नभएपछि हिन्दू धर्मावलम्बी र धर्म गुरुहरुलाई आन्दोलनका लागि उक्साउन आचार्य श्रीनिवास आफैंले योजना बनाएर गोली हान्न लगाएको पाइएको मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी अरुण बिसीले जानकारी दिए ।
प्रहरीका अनुसार आचार्यले हातमा गोली हान्न भनेका थिए तर, गल्तीले छातीमा लागेको हो । अभियुक्त चौधरीले पुर्वयोजना अनुसार आफूले ५ मिटर टाढाबाट गोली प्रहार गरेको तर निशाना चुकेपछि दाहिने कुम छेउमा लाग्न गएको बताए ।
चितवनमा नै गोली प्रहार गर्ने प्रपन्च रचिएको भए पनि हतियार ब्यवस्थापन नहुँदा सफल नभएको पाइएको छ ।
घटनामाथि शंका नगरोस् भनेर उनीहरुले मंगोल आर्मीको नक्कली पर्चा समेत छरेका थिए । तर, प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा आचार्य श्रीनिवासको पोल खुलेको छ ।
पक्राउ परेका माधव चौधरी र लक्ष्मीराज अधिकारीलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा चलाइएको छ । तर, आचार्यमाथि के मुद्दा लगाउने छलफलमै छ ।
आचार्यका गतिविधि यसअघि पनि शंकास्पद थियो । केही समय अघि सुनसरीमा भएको हिन्दुवादीको प्रदर्शनमा आचार्यकै अगुवाईमा भारु बाँडिएको थियो । यसअघि उनले संविधान बनेको एक साताभित्र देशभरका चर्चहरुमा धावा बोल्ने धम्की दिएका थिए ।
२०७५ वैशाख २४ गते २०:२० मा प्रकाशित
« Reply #22 on: May 09, 2018, 12:02:45 PM »
« Reply #23 on: May 29, 2018, 12:56:28 AM »
« Reply #24 on: June 02, 2018, 02:50:43 AM »
« Reply #25 on: June 03, 2018, 12:29:19 AM »
« Reply #26 on: June 03, 2018, 06:16:33 AM »
Screen Shot 2018-06-02 at 8.30.23 PM.png (615.1 kB, 616x718 - viewed 282 times.)
« Reply #27 on: June 03, 2018, 10:10:18 PM »
भिडियो मा चर्चा ..
« Reply #28 on: June 09, 2018, 10:15:06 AM »
« Reply #29 on: June 13, 2018, 08:01:37 AM »